ဟော်လန် Tulip ရာသီခံစားကြည့်ပါရန်မည်သို့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဟော်လန် Tulip ရာသီခံစားကြည့်ပါရန်မည်သို့
ဟော်လန် Tulip ရာသီခံစားကြည့်ပါရန်မည်သို့
ရထားအားဖြင့်ဟော်လန် Tulip ရာသီတွေ့ကြုံခံစားဖို့အမှန်တကယ်မဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် နွေရာသီခရီးသွားမယ့် ပြက္ခဒိန်. တစ်လဒါမှမဟုတ်ဒါနှစ်တိုင်းများအတွက်, the fields of the Flevoland ၏ပြည်နယ် are transformed intoabeautiful and vast sea of colorful flowers of more than7သန်း Bloom. တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟိဂ်နှင့် Leiden ထံမှ, မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Alkmaar မှတက်သင်ဤလှပသောမျက်မှောက်တွေ့ကြုံခံစားရမှာပါသည်အဘယ်မှာရှိ. တဦးတည်းပုံမှန်အားဖြင့်စက်ဘီးအားဖြင့်ဟော်လန်၏လွင်ပြင်ခရီးသွားလာဆက်စပ်နေစဉ်, နည်းများအတွက် စွန့်စား Tulip ရာသီ၌ရှိသမျှသောဘုန်းအသရေကိုတွေ့ကြုံခံစားရန် ပို. နှစ်သက်ဖွယ်လမ်းမီးရထားဖွငျ့ဖွစျသညျ! Here are some top tips to enjoy Holland tulip season by train travel.
လာမည့် Holland Tulip ရာသီအတွက်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပါ
၏အဆုံးကနေ Tulip ရာသီပြေး မတ်လ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မေလတိုင်အောင်, ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝပွင့်အတွက် tulips ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ဝက်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် ဧပြီလ. သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ရာသီဥတုအပေါ်စစ်ဆေး ရာသီအဘို့နှင့်သင်အကောင်းဆုံးအချိန်ရသေချာစေရန် booking ရှေ့၌သင်တို့သုတသေနပွု.
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှ Hanover
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှဟမ်းဘတ်
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှဘာလင်
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှ Cologne
The Best Times To Visit The Gardens and Fields during Holland Tulip Season
ဟော်လန် Tulip ရာသီတွေအများကြီးဆွဲဆောင် ခရီးသွားဧည့်များနှင့်ဧည့်သည်များ ပန်းဥယျာဉ်များနှင့်ဇမ္ဗူခင်းများသို့သွားလည်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်များမှာ၎င်းတို့မဖွင့်မီနှင့်နာရီအနည်းငယ်အလိုအလိုတွင်မကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်သည်. သင်တို့သည်ငါတို့၏ထဲကအများဆုံးလုပ်နိုင်အောင်အညီသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ် အတှေ့အကွုံ နှင့်လူအစုအဝေးမရှိဘဲအချို့အကြီးအဓာတ်ပုံများရနိုင်.
Cologne Maastricht မှရထား
ဘာလင် Maastricht မှရထား
သင်က Go ခင်မှာသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
အဆိုပါ tulips ကြည့်ဖို့လာမယ့်လူဦးရေကြောင့်, ရထားဟော်လန် Tulip ရာသီကြုံနေရမဟုတ်ဘဲအလုပ်ရှုပ်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ရှေ့ဆက်စီစဉ်ဖို့အရေးကြီးတယ် နှင့်သင့်စာအုပ်ဆိုင် ကြိုတင်လက်မှတ်များ တတ်နိုင်သမျှသင်တို့အပေါ်မှာရနိုင်ကြသည်ကိုသေချာနှင့်အံ့မခန်းအမြင်များကိုခံစားဖို့.
Visit Flevoland foraQuieter Experience of Holland Tulip Season
သငျသညျ tulips ပိုနည်းတဲ့နေရာကိုရှာနေပေမယ့်လူ ဦး ရေနည်းနည်းနှင့်အနည်းငယ် စျေးနှုန်းချိုသာစျေးနှုန်းများ ထို့နောက် Flevoland သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. သင်ကဖမ်းနိုင်ပါတယ် အမ်စတာဒမ်ကနေကဒီမှာရထား သငျသညျအထွတ်အထိပ်နာရီအကြာတွင်ကြောင့်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်နှင့်သင်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် စက်ဘီး ရထားပေါ်မှာ, သောနှင်းပန်းလယ်ကွင်းန်းကျင်သင်သည်တတ်နိုင်သံသရာဆိုလိုတယ်. ခရီးတလျှောက်တွင်ထိုအမြင်များ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြပြီးအလွန်ကြီးစွာသောများများရှိပါတယ် ဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်း.
မြူးနစ် Utrecht မှရထား
Utrecht ရထားမှ Cologne
Utrecht ရထားမှ Frankfurt
Leiden သို့မဟုတ် Haarlem သွားရောက်ကြည့်ရှု
သင်ကျော်ကြားသော "ပန်းမြှောင်" ၏ခြွင်းချက်အမြင်များရလိမ့်မယ်နဲ့အဲဒီမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီတစ်ချိန်က tulips ၏အတန်းအကြားလမ်းလျှောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင် Leiden သို့မဟုတ် Haarlem မှရထားအမီလိုက်နိုင်ပါတယ်. ဤသူကားအ တစ်နေ့တာခရီးစဉ်များအတွက်စံပြ နှင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလွန်လူကြိုက်များခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာ.
ရထားဟော်လန် Exploring အဆိုပါ Tulip ရာသီအတွင်း ပို. ပင်ဒါကြောင့်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံသည်နှင့်. ဖြစ်နိုင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စာအုပ်နေ့ချင်းညချင်း ကျန်ရှိနေခြင်းနှင့် ရထားခရီးစဉ် တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းပေမယ့်ဒီအနည်းငယ်ပိုပြီးစျေးကြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် Tulip လယ်ကွင်းစူးစမ်းဖို့လျော့နည်းအချိန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာစေခြင်းငှါ. တစ်ဦး အဖွဲ့အစည်းကသော့ချက် ဒီအလုပ်ရှုပ်အချိန်ကုန်နေစဉ်အတွင်းဒါဟော်လန်အတွက် Tulip ရာသီထဲကအများဆုံးစေရန်ရှေ့ဆက်စီစဉ်ရန်သေချာစေပါ!
Haarlem ရထားမှ Antwerp
ဘာလင် Leiden မှရထား
ပဲရစ် Leiden ရထားမှ
သင့်ရဲ့ခံစားကြည့်ပါ ရထားခရီးစဉ်, မင်းရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကိုဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့အယုံကြည်ရဆုံးနေရာကိုဖြတ်ပြီး, တစ်ဦးကရထား Save သင်အခြားလိုအပ်မယ်ဆိုရင် ဥရောပရထားလက်မှတ်တွေ, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်, go to our website and enjoy the ride.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fholland-tulip-season-by-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml သင် / es မှ / pl ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ.
ရထားခရီးသွား ခရီးသွား ခရီးသွား netရာဝတီ traveltips နှင်းပန်း
ကားသွားလာရေးသိကောင်းစရာများ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
Eco ခရီးသွားအချက်အလက်များ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
အဘယ်အရာကို Provence ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုခုနှစ်တွင်ကြည့်ရှုပါရန်
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ဥရောပခရီးသွား